समाचार - किन चीन मा तपाइँको पीसीबी निर्माता खोज्न को लागी
किन चीन मा तपाइँको पीसीबी निर्माता खोज्न को लागी
चीन संसारको सबैभन्दा ठूलो मुद्रित सर्किट बोर्ड उत्पादन मूल्य देश हो। वर्तमान मा, एशिया मा पीसीबी उत्पादन मूल्य विश्व को कुल को% ०% को नजिक छ। ती मध्ये, चीन र दक्षिण पूर्व एशिया को सब भन्दा छिटो बृद्धि छ। जे होस्, किन चीन मा तपाइँको आफ्नै पीसीबी निर्माता खोज्न?
दक्षिण पूर्व एशियाली देशहरु संग तुलना, चीन मात्र एक पूर्ण कच्चा माल आपूर्ति श्रृंखला लाभ र कम लागत लाभ छ, यसको निर्माण क्षमता र प्राविधिक विशिष्टताहरु विदेशी ग्राहकहरु को आवश्यकताहरु लाई पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। चिनियाँ बजार तपाइँको परियोजना को लागी पर्याप्त संसाधनहरु प्रदान गर्न सक्छ। चीन को इलेक्ट्रोनिक टेक्नोलोजी को द्रुत विकास संग, पीसीबी निर्माण क्षमताहरु लाई पनि धेरै सुधार गरीएको छ। यो विशाल बजार मा, तपाइँ सजिलै संग एक पीसीबी निर्माता पाउन सक्नुहुन्छ कि दुबै सस्तो र उच्च गुणस्तर प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। यो कारण हो कि चीन मा पीसीबी निर्माण अधिक र अधिक लोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ।
1. तपाइँको निर्माण लागत घटाउनुहोस्?
पीसीबी निर्माण उद्योग मा, श्रम लागत धेरै पीसीबी निर्माण को लागत लाई प्रभावित गर्दछ। चिनियाँ बजार मा कम श्रम लागत भएको धेरै तपाइँको पीसीबी लागत घटाउन सक्छ। यसको अतिरिक्त, चिनियाँ टेक्नोलोजी को छिटो विकास संग, तपाइँ चीनी बजार कम लागत वैकल्पिक सामग्री को एक ठूलो संख्या पाउन सक्नुहुन्छ, जो तपाइँ उत्पादन को प्रदर्शन लाई प्रभावित नगरी धेरै पैसा बचाउन सक्नुहुन्छ। चीन मा, संसाधन आवंटन सबैभन्दा सजिलो छ। एक एकल उत्पादन को अतिरिक्त, चीनी पीसीबी निर्माताहरु एक स्टप सेवा प्रदान गर्न सक्छन्, प्रारम्भिक पीसीबी डिजाइन बाट समाप्त उत्पादन को अन्तिम विधानसभा सम्म, तपाइँ आश्वस्त हुन सक्नुहुन्छ कि तपाइँ यसलाई चीनी पीसीबी निर्माता लाई छोड्न सक्नुहुन्छ पूरा गर्न। यसको अतिरिक्त, चीन सुविधाजनक परिवहन संग एक सुविधाजनक कार्गो यातायात प्रणाली छ। उत्पादन को समयबद्धता र प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न को लागी सामान को वितरण समय छोटो गर्न सक्छ।
2. कसरी सस्तो र उच्च गुणवत्ता पीसीबी निर्माता पाउन
चीन मा विशाल पीसीबी बजार को कारण, सर्किट बोर्ड निर्माताहरु को सेवाहरु अनिवार्य रूप बाट असमान छन्। त्यसोभए कसरी सर्किट बोर्ड कारखानाहरु को हजारौं बाट सस्तो र उच्च गुणवत्ता पीसीबी निर्माताहरु लाई खोज्न को लागी?
राम्रो पीसीबी निर्माताहरु तनमनले ग्राहकहरु लाई विचार गर्दछन्, सबै ग्राहकहरु को शंकाहरु लाई हटाउन, र ग्राहकहरु को लागत लाई कम गर्दछ।
1. यदि पीसीबी निर्माताहरु मूल्य संरचना सहित एक स्पष्ट उद्धरण दिन सक्नुहुन्छ
2. यदि पीसीबी निर्माताहरु तपाइँको लागत कम गर्न को लागी कुनै प्रभावी सुझाव दिन इच्छुक छन्।
3. यदि पीसीबी निर्माताहरु आदेश पछि कुनै अनुचित लागत चार्ज।
4. के उनीहरु तपाइँको अनुमति बिना कुनै अज्ञात सामाग्री को उपयोग गर्छन्।
फिलिफास्ट १० बर्ष भन्दा बढी को लागी पीसीबी ईएमएस सेवाहरुमा ध्यान केन्द्रित गरी रहेको छ, र यो प्रतिस्पर्धी मूल्यहरु प्रदान गर्दछ।
यो पनि एक संरचित र स्पष्ट उद्धरण प्रणाली संग ग्राहक लागत घटाउन ग्राहकहरु लाई पेशेवर सल्लाह प्रदान गर्दछ।